Maybelline cushion အပြာ အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Maybelline cushion အပြာ
နေပူတဲ့အချိန် ချွေးထွက်တာကြောင့် Babellines တို့ အလှပျက်မှာ စိုးရိမ်နေရလား ?
နေပူတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကာကွယ်ဖို့ရယ် / အရေပြားကင်ဆာ ကိုဖြစ်တဲ့ UVA ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း ခေါင်းစားနေရပြီ ဟုတ် ?
ဒါဆိုရင်တော့ Babelliens တို့နဲ့ BB Cushion Fresh Matte က ဒီနွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့…..
• UVB အတွက် SPF 29 ပါဝင်ပြီး UVA အတွက် PA + ပါဝင်တယ်.
• ပေါ့ပါးချောမွေ့စေတဲ့အပြင် အဆီပြန်တာကိုလည်း ထိန်းပေးတယ်.
• ဘယ်ကိုပဲ သွားသွား အလွယ်တကူ သယ်သွားဖို့လည်း လွယ်ကူတာကြောင့် ……..
ကဲ နေပူဒဏ်ကို Babellines တို့ BB Cushion Fresh Matte နဲ့ ကျော်ဖြတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ ။
Price- 18500 ks
အမည်: Maybelline cushion အပြာ